Shop App ရဲ့ ဘယ် Social Media တွေကနေ ဘယ်လိုပရိုမိုးရှင်း အကျိုးခံစားခွင့်တွေရရှိနိုင်မလဲ? - Shop
Shop App ရဲ့ ဘယ် Social Media တွေကနေ ဘယ်လိုပရိုမိုးရှင်း အကျိုးခံစားခွင့်တွေရရှိနိုင်မလဲ?0109
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မြန်မာ့နံပါတ် (၁) ရှော့ပင်းအက်ပလီကေးရှင်း (Shop App MM) ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာချယ်နယ်များမှ မတူညီတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအကျိုးခံစားခွင့်များကို နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Shop App ရဲ့ ဘယ် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေက ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေ တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင် ..
သန်းပေါင်းများစွာကုန်ပစ္စည်းများကို ထောင်ပေါင်းများစွာသော ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူများအား ချိတ်ဆက်ပေးလျက်ရှိသာ Shop App အား အခုပဲ Download ပြုလုပ်ရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
Shop App ရဲ့ စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးများ၊ Giveaway အစီအစဉ်များ၊ အသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ Official Store ကြေညာချက်များ၊ ပို့ဆောင်မှုအခမဲ့နဲ့ ကူပွန်လျှော့စျေးကြေညာချက်များအပါအဝင် အခြားသောအထူးအစီအစဉ်များနှင့် Shop App တွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တိုင်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ Shop ချစ်သူများအတွက် ကြေညာပေးလျက်ရှိတာဖြစ်လို့ မလွတ်သွားဖို့ Shop App MM – Facebook Page နဲ့ Story တို့ကို Like & Follow ပြုလုပ်ထားပြီး မျက်ခြေမျက်စောင့်ကြည့်ဖို့ လက်တို့လိုက်ပါတယ်နော်။
Shop App MM – Facebook Page နဲ့ချိတ်ဆက်ရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
တစ်နေ့တာ ဘဝအမောတွေ ပြေစေလိုသူများအတွက် Shop App MM ရဲ့ Instagram ကို Follow ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Gaming, Quiz ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများ၊ Shopping Meme များ၊ ဗဟုသုတရဖွယ်အကြောင်းအရာများနှင့် အခါကြီးရက်ကြီးဆုတောင်းများ၊ Customer Review များ၊ စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးများနှင့် အထူးပရိုမိုးရှင်းကြေညာချက်များကို Shop App Instagram နဲ့ Story တို့တွင် အချိန်နဲ့တပြေးညီ အဓိကတင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Shop App MM ရဲ့ Instagram နဲ့ချိတ်ဆက်ရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
Shop App MM ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အရေးကြီးအစီအစဉ်များနှင့်အတူ Channel Manager နဲ့ တိုက်ရိုက်အမေးဖြေပြုလုပ်ချင်ရင်တော့ Shop App – Viber Channel က သင့်အတွက် နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Shop App MM ရဲ့ Viber Channel နဲ့ချိတ်ဆက်ရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
တစ်ပတ်တာရဲ့ အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များကိုသိရှိပြီး ပို့ဆောင်မှုအခမဲ့ဖြင့် ကူပွန်လျှော့စျေးတွေနဲ့ဝယ်ယူချင်သူများအတွက် Shop App MM ရဲ့ Telegram Channel ကို Join ထားဖို့လိုမယ်နော်။ ထို့အပြင် Official Store ကြေညာချက်များနှင့် စျေးရောင်းပွဲတော်အကြောင်းအရာများကိုလည်း Telegram တွင် နေ့စဥ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Shop App MM ရဲ့ Telegram Channel နဲ့ချိတ်ဆက်ရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
Shop App ရဲ့ Shop Live ကဏ္ဍ မှ တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ ဗဟုသုတရဖွယ်နှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗွီဒီယိုများနှင့်တကွ ဖျော်ဖြေရေးဗွီဒီယိုများ၊ Shop App အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးဗွီဒီယိုများကို တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်
Shop App MM ရဲ့ YouTube Channel နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
Shop App ရဲ့ LinkedIn စာမျက်နှာတွင် ဝန်ထမ်းရေးရာဆိုင်ရာ Vacancy Announcement များနှင့် နိုင်ငံတကာအထိမ်းအမှတ်နှင့် စျေးပွဲတော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Shop App MM ရဲ့ LinkedIn နဲ့ချိတ်ဆက်ရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
စျေးပွဲတော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၊ လူထုအကျိုးပြုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့် ဗဟုသုတရဖွယ် ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကို ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ဖြင့် အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်ရှုချင်သူများအတွက် Shop MM ရဲ့ Shop Life Blog (blog.shop.com.mm) ကသင့်အတွက် အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။
Shop App MM ရဲ့ Shop Life Blog နဲ့ချိတ်ဆက်ရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
BlogChannelDarazDaraz MMDaraz MyanmarFacebookInstagramLinkedInShopShop AppShop App MMShop Life BlogShop MMShop.comshop.com.mmSocial MediaTelegramViberYouTube
Previous ArticleLet’s Bake Katy Perry’s World’s Best Cherry PieNext ArticleCollagens For Summer!